Hanova ny fomba fitantanana: kandidà filoham-pirenena Rajoelina | NewsMada
Hanova ny fomba fitantanana: kandidà filoham-pirenena Rajoelina
Noraisin’ireo mpomba azy tamin’ny tehaka mirefodrefotra ny fanambaran’ny mpanorina ny IEM, Rajoelina, fa kandidà filoham-pirenena ny tenany. Natsidiny sahady fa voasedra izy ary vonona ka hitondra fanovana ny fomba fitantanana.
“… Manoloana izany rehetra izany, ho kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny tenako”, hoy ny filohan’ny Tetezamita, Rajoelina, tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, omaly. Nialohavan’ny fampahatsiahivina ny lalana nodiaviny sy ny dingana vitany ary ny tantara politikany izany. Nanomboka fony izy tanora hatrany amin’ny fitantanany orinasa. Nitohy amin’ny fitantanana ny kaominina Antananarivo Renivohitra izany. Teo koa ny naha filohan’ny Tetezamita azy. “Tanteraka ny fanamby tamin’ireny fotoana ireny. Anisan’izany ny kianjan’ny Makis, ny hopitaly manara-penitra manerana ny faritra, ny lapan’ny Tanàna amin’ny kaominina marobe, ny nampiakarana ho 10% ny karaman’ny mpiasam-panjakana. Tao anatin’ny fotoana fohy avokoa izany… Haingam-pandeha ny TGV”, hoy izy.
Kandidà efa voasedra sy vonona
Nanteriny hatrany fa efa voasedra sy vonona ny tenany matoa naka izao fanapahan-kevitra izao. Teo koa ny fahitany ny olana eto amin’ny firenena. Eo, ohatra, ny sosialy sy ny toekarena ary koa ny fihariana. Notanisainy tamin’izany fa very fanahy mbola velona ny vahoaka. Mahantra sy miaina tebiteby ny mponina. Manginy ny tsy fandriampahalemana ary koa ny kolikoly. “Adidy ny mitondra vahaolana ary efa ato anatin’n y IEM avokoa izany. Ahitana ireo tetika matipaika hitondra fampandrosoana haingana sy maharitra ary ao anatin’ny fotoana fohy ny firenena. Hanova ny fomba fitantanana ny firenena isika mba ho voalohany aty amin’ny ranomasimbe Indianina sy aty Afrika i Madagasikara”, hoy ihany izy.
Kandidà voalohany nametraka ny antontan-taratasy ny TGV
Manampy ireo ny hanafoanany avy hatrany ny Antenimierandoholona ka hananganana oniversite manokana ho an’ny tanora any amin’ ny faritra ny vola amin’io andrimpanjakana io. Manoloana izany, niantso ny rehetra hiray saina sy hifanome tanana aminy ny mpanorina ny TGV-Mapar. Nanteriny fa tsy hisy hahasakana ny lalana rehefa manana finoana. Hotanterahina ny nampanantenaina. “Isika tsy naman’ny resy izany fa mandresy rehefa manao fifaninanana”, hoy Rajoelina.
Tsiahivina fa kandidà voalohany nametraka ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiny etsy amin’ny HCC, naneho izany fahavononana izany, ny mpanorina ny IEM, Rajoelina. Tafapetraka, omaly tamin’ny 3 ora tolakandro etsy Ambohidahy, izany.
Araka izany, andrasana indray ny kandidà hafa hanambara na hanamafy ny firotsahany. Nialoha lalana sady voalohany aloha izany ny TGV.